Ziziphi iimpendulo ezifanelekileyo zokufumana isakhiwo sequmrhu elinamandla?
Eli nqaku lenzelwe ukukunceda uqonde izinto ezisisiseko zezona zinto zibaluleke kakhulu zokunxibelelanisa injini yokucwangcisa i-tactic-link link.
I-backlink ibalulekile ekudaleni ubume be-intanethi. Abaphathi beWebhsayithi kunye nabaqhagamshelanisi bekhonkco rhoqo baxoxisana ngeendlela zokufumana izikhonkco ezingenayo, indlela yokubenza bajonge ngokwasemzimbeni, kunye nendlela yokufumana amathuba okwakha iinqununu eziphezulu.Into efunekayo kukuba kufuneka udale umgangatho kunye neprofayile yekhonkco ye-organic ekukhuselekeni izigwegwe zenjini. Udinga ukukhathalela ngamagunya kunye nedumela yemithombo yewebhu apho iifowuni zakho ziza khona kuba ixelela izitshixo zokukhangela malunga nedumela lakho lewebhusayithi. Iziqhagamshelo zakho ezingenayo zichonga indawo ye-site yakho, ke kutheni unxibelelwano isakhiwo kufuneka sibe yinxalenye ebalulekileyo yokuthengisa kunye neenjini zokukhangela iimaphulo.
Namhla siza kugxila kwiziphi i-backlink kunye nokuba kutheni zibambe iqhaza eliphambili ekukhuthazweni kwewebhusayithi.
Ngoko ke yintoni i-backlinks?
I-backlink yi-hyperlink evela kwindawo enye ukuya kwenye. Kukho ezimbini iintlobo ze-backlinks dofollow kunye nof. Iifayile ezilandeleyo zilandelayo zizo zinto esizifunayo kwiinkcukacha zethu zoqhagamshelwano. Ezi zidibanisa ixabiso lentengo kumthombo wewebhu odibeneyo ngendlela ebizwa ngokuba yi "juice link". "I-Google bots parse ilandele i-backlinks kwaye iphakamileyo isiteti esithunyelwe kuyo. I-Nof ilandele i-backlink ifanele ibekwe kwifayile yakho yekhonkco ukubonisa iGoogle ukuba udibanisa kwimithombo eyahlukeneyo yewebhu kungekhona nje ukufumana i juyisi yelinki. Ezi ziqhagamshelwano zinomfanekiso ongasemva kwaye awudluli naziphi na ixabiso kumthombo odibeneyo. Ayibonakali kwibhokisi yokukhangela kwaye njengomthetho, ayikwazi ukulandelwa ngabasebenzisi abasebenzisi. Bakhonza nje nje ngegama elibizwa ngegama. Nangona kunjalo, ukuba unendlela efanelekileyo kwiphankaso yakho yokwakha ikhonkco, uya kukwazi ukufaka endaweni ye-backlinks nge-dof.
Kutheni i-backlink isebenza njengendlela yokubeka imigangatho kwiGoogle?
Xa i-Google ihlalutya ikhonkco ekhomba kwi-site yakho, inxulumana nexabiso lakho lewebhu kunye negunya lomthombo wewebhu unxibelelwano. I-Google iyakhangisa njengokuvota kwiwebhusayithi. Ukuba ivoti ivela kwisayithi ehloniphekileyo, inokuthi ithinte i-website yesiteti kwaye ngokuphambene nokuba ivoti ivela kwi-spammy, umgangatho wezantsi webheferensi, iya kuchaphazela kakubi indawo yakho yeSOO.
Ngokuqhelekileyo, isicwangciso soqhagamshelwano esiqhelekileyo sidibanisa ngale ndlela: "Ukuba umthombo othile wewebhu ubona isiqulatho somxholo sibe luxabiseke ngokwaneleyo ukudibanisa kuwo, kwaye lo mthombo ubonakalisa kakuhle kwaye ugunyaziwe, ngoko iwebhusayithi edibeneyo kufuneka ibe yiwebhusayithi efanelekileyo ".
Into oyifunayo ngokucwangcisa iqhinga lakho lokubuyela emuva
Ukwenza iphrofayili ye-backlink esemgangathweni, kufuneka uyibeke ingqalelo kwimpatho yewebhusayithi apho Ndingathanda ukwakha izixhumanisi. Yingakho kumgca wecandelo lakho lokwakha unxibelelwano olufunekayo ukuqhuba uphando olunzulu lweemarike kwaye ufumane imithombo yewebhu ekufuneka uyiqwalasele. Okukhethwa kukho kukuqhagamshelana newebhusayithi ephezulu ye-PageRank kunye neeblogi ezichaphazelekayo kwishishini lakho.
Enye yezindlela ezilungileyo zokufumana i-backlink yindwendwe yokuthumela. Ungakwazi ukufumana kalula i-backlink kwiwebhusayithi yakho ngokufaka ifowuni kwisithuba sakho somthunywa. Ngelishwa, izinto ezininzi ze-spammy ezizungeze lobu buchule bokwakha idibanisa ziphazamise umvakalisi othumela idumela. Ngo-2012 i-Google isungulwe ukuhlaziywa kwePenguin eyatshatyalalisa i-rankings yewebhsayithi eyayisebenzisa ubuchule bokuqhagamshela i-spammy.
Yingakho kwiintsuku zethu zidibanisa abakhi becebisa ukuba basebenzise isicatshulwa esisodwa kuphela ngokuxhuma kwi:
Ibinzana elibukeka lendalo ngokwetekisi kwaye alihambisani ngqo negama elingundoqo elijoliswe kuyo.
Ibinzana elingahambelani negama lakho legama.
Igama le nqaku obhekisela kuyo.
Esikhundleni sokufihla i-backlink yakho nge-SEO ecacisiweyo yombhalo we-anchor, nikeze abafundi bakho ngolwazi olungakumbi ukuze bavumele ukuba baqonde isizathu sokuba bafune ukulandela isixhumanisi sakho kunye nendlela abanokuzuza ngayo Source .